१९ वर्षकी भएँ योनिमा लिङ्ग छिर्दैन अनि दुख्छ ? - HealthyKhabar
डिम्बाशयको खराबी जस्तै polycystic ovarian syndrome जस्ता स्थितिमा डिम्ब राम्रोसँग परिपक्व हुन सक्दैन । महिनावारी नियमित नहुने जस्ता कुरा देखिन्छन् । गर्भधारण गर्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण महिलाको डिम्बवाहिनी नलीमा भएको खराबी हो ।
त्यस्तो हुँदा पुरुषबाट आएको शुक्रकीटसँग महिलाको डिम्ब मिलन हुन सक्दैन र यदि मिलन भैहाले फेरि पाठेघरसम्म आउन नसक्ने स्थिति हुन्छ । विशेष गरेर कतिपय यौनरोग तथा Pelvic inflammatory disease जस्ता परिस्थितिमा यस्तो हुन्छ । त्यसबाहेक कतिपय स्थितिमा यस्तो किन भएको हो भनेर कारण थाहा पाउने स्थिति पनि हुँदैन ।
तपार्इंले कुनै चिकित्सकलाई देखाउनु भए–नभएको अनि के–कस्ता उपचार गराउनुभयो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छैन । कतिपय यौनरोगको उपचार छ र यो निकै सजिलो पनि छ । यौनरोग आफंै ठीक नहुने मात्र होइन कि घरेलु उपचारले पनि ठीक हुँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो उपचार गराइहाल्नुपर्छ । कुनै पनि लक्षण थाहा पाउनासाथ चिकित्सकसँग सल्लाह लिन जानुपर्छ । तपाईं कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र वा चिकित्सकको निजी क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ ।
चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधी पूरा मात्रा खानु आवश्यक छ । चिकित्सकसँग कुराकानी गर्दा आफू संलग्न भएको कुनै पनि जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारका बारेमा नलुकाई भन्नुपर्छ ताकि रोगको ठीक निदान गर्न सजिलो होस् । दुवै जना अर्थात् यौनजोडीले एकसाथ उपचार गराउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंको श्रीमान्मा कुनै लक्षण देखिएको छ कि छैन भन्न पनि बिर्सनु हुँदैन ।
राम्रोसँग उपचार नभएको स्थितिमा यीमध्ये केही रोग जस्तै Chlamydia वा Gonorrhea जस्ता यौन संक्रमण पाठेघर हुँदै डिम्बवाहिनी नली तथा वरिपरिको भागसम्म फैलन सक्छ र PID (Pelvic Inflammatory Diseases) गराउन सक्छ ।
तपाईंले बुझिहाल्नुभयो होला, यौनरोगहरूले प्राय:जसो प्रजनन प्रणालीसम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्छन् । उपचार नै नगरिएको वा राम्रोसँग निको पार्न नसकिएका यौनरोगले प्रजनन अंगमा हानि पुर्‍याउन सक्छन् । यसो हुँदा पाठेघरबाहिर गर्भाधान हुने, गर्भ तुहिने तथा बाँझोपन हुनेजस्ता अनेकौं समस्या देखा पर्न सक्छन् । यदि बेलैमा उपचार गराइएन भने कुनै–कुनै यौनरोगले कडा तथा स्थायी रूपमा अन्धोपन, मुटुको रोग, क्यान्सर तथा मृत्युसम्म गराउन सक्छ ।
अर्को कुरा, बच्चालाई सरेर समस्या मात्र पर्ने होइन कि बच्चा तअंगभंग भएर जन्मिने वा मृत्यु हुनेसम्म हुन सक्छ ।
त्यसैले तपाईंहरू दुवै जना गएर स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई एकपल्ट राम्रोसँग परीक्षण गराई यौनजन्य कुनै संक्रमण छ–छैन, निदान गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि त्यसैअनुसार उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । डा. राजेन्द्र भद्रा, साप्ताहिकबाट